Xogta Nederlandka, muuqaal ka mid ah Latin American ah - Geofumadas
Xaaladda Nederlandiga ah, oo ka tarjumaysa Latin American ah
Nederland waxay sii wadi doontaa inay tixraacdo dhacdooyin dhowr ah oo ku saabsan qaybta tiknoolajiyadda, laakiin ka hor inta aan isku dayo arrimaha qaarkood oo iga dhigaya inaan qoro, iyo sidoo kale waqtiyadii ugu dambeysay ee safarkeyga Waxaan rabaa in aan sii daayo qadar miyir leh oo sugaya saacado badan oo dusha sare ah, taasina waa kharash badan, sababtoo ah dalabku wuxuu khiyaamayaa diyaaradda. Sidoo kale sababtoo ah ma awoodi doono inaan qoro kore sababtoo ah riyadu ma ogaanayso in ay timaaddo ama tagto markaad kala qaybsan tahay, halka Amsterdam ay tahay 5 gelinka dambe, Houston waxay yihiin 10 subaxdii; wuxuu ku daray in yaraanta la aqbali karo ee u tagtay 10 am marka goobta ay ku sugnaayeen 3 ee waaberiga. Jahwareerka xogta qarsoodiga ah ee gps ee aynu ku qaadno gudaha.
Waxaan ku furi doonaa this article leh in ka badan oo kaliya laba ujeeddo, inkastoo guud ee warbixinta, sababtoo ah waxaan u maleynayaa in ay jiri doonaan kuwa ka dhinacan Dhawa og Holland: waa kan Hague, halkaas oo ay xukumi our dhibaato caalami ah halkaas, dhaqankooda weli walxood unmistakable sida kabaha qoryaha iyo dabaylaha. buffs taariikhda Qaar kale waxay ogaan doonaan oo kaliya in Ruud Gullit ciyaaray Orange clockwork iyo wax ka badan hal ayaa maqlay inuu caado dulqaad, lacag caddaan ah dadka saboolka ah ee ardayda sarrifka keeni xusa ugu yaraan saddex sababood oo ah sababta ay halkaas ku tegi lahaa in ay sameeyaan sayidkooda :
Matxafyada ugu fiican, Waxaa ka mid ah matxafka Heineken beerta, oo cabitaan la cabbo sida biyaha oo kale, oo ay ku jiraan talo bixinta caafimaad ee 8 muraayadaha maalinlaha ah ee caafimaadka.
Wixii bandhigga iftiinka habeenkii, oo ay ku jiraan kuwa gaduudan ee gabdhaha, oo leh gabdhaha ku jira bandhigyada, dhaqdhaqaaqa sharci ahaan. Soo jeedi olole ka socda xafiiska dalxiiska haddii aad tagtay Holland oo aadan cunin waxa uu soo saaro, adigu ma sii sheegin waxa aad ahayd.
Wixii dhadhan fiican ee kafeega, Inta badan Amsterdam oo dhan, halkaas oo ay u adeegaan kafee marijuana piqué, taas oo sidoo kale si sharci ah u wada baabbi'iyey.
Hase yeeshee, fikradda nuxurkul-dlka ah ee Dutchku waxay qaadataa wax ka badan safarada mitraga taariikhi ah, dhirta tulubyada qulqulaya ama beeraha hadda jira ee dabiiciga ah ee meel kasta leh. Sidaa darteed si looga fogaado dembiga fudud, waxaan dareemayaa in tani ay tahay fikradayda kaliya ee ka jirta aragtida gaarka ah; Qeyb ka mid ah qaxwaha ... haddii aysan ku raacsanayn, qof waliba wuu tagaa oo wuu iska fiiriyaa.
Wargeysyada ayaa sax ku ah halkaasi, si uu baaskiilka u eego cinwaanka; iyo inkasta oo aysan jirin wax iyaga ka cabsi qabta, waxay ku dhaliili doonaan fadeexadda Berlusconi. Waxay ku yidhaahdeen saddexda x calanka rasmiga dhignaan kartaa in aad dulqaad noocyada nolosha, taas oo iska cad isku ula macno inkastoo aan ognahay in waalidnimada darro, musuq-maasuqa iyo u sinnaan la'aanta bulsho yihiin falalka our ku dhowaad aqbalay sida deegaanka xalaal; Waxay sidoo kale tixgeliyaan marka ay noo tixraacayaan.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo ay ku diidaan diidmo midab-takoor ah, hadana maaha inay ku dhaqmaan mabaadii'da dhaqanka. Uma danaynayaan jihada galmada ee ilmahoodu qaato, laakiin ma aha inay la wadaagaan Moroccans markii ay ka tagayaan dugsiga. Sidaas awgeed waxay u badan tahay inay maqasho weedho sida:
- Anigu maaha cunsuri, laakiin waxaan ka baqayaa Poles mana istaagi karo Moroccans ...
- Caruurta, ma nihin jinsi, laakiin ma aqbalno iyaga maxaa yeelay waxay waxyeello u geystaan ​​bulshadeena ...
Taasina waa sida aynu nahay aadanaha. Marka laga duwo sida UTM bedesho aagaggiisa, waxa ay naga helayaan qaabka ay qoysku u shaqeynayaan, xiriirka bulsho ama ruuxa hagaajinta waa noocyo kala duwan. Xaqiiqdii wax ka badan hal mar ayaan u arkay in aan nafteyda u arko inaan ku raaxaysto caruurtayda qaabka Mesoamerican, hadda ka badan in markii ugu horeysay ee aan muujiyay egeomate.com si ay u dhegeystaan ​​dhageysiga aan aheyn Hispanic.
Waxaa laga yaabaa in aan ka duwanaan karno sida aan ku muujinno jacaylka qoyska, xidhiidhkooda qoysku waa qabow, ma aha sababtoo ah waa xun, laakiin waa goob kale. Qaar ka mid ah kuwan waxaan ku aragnaa qaar ka mid ah dalaladayada, laakiin ma aha guud ahaan. Maamulayaasha labaad ama waxay ubaahanyihiin in ay lacag sameeyaan waa mid aan daneynin in caruurtu dhasho, halkan waxaan ka qoomameyneynaa in gabadheena 26 ay guursato sannado, halkaas oo ay ku jirto si degdeg ah.
-Waxaad taqaanaa gabadha talada ugu fiican: isticmaal kondhom, ma daryeesho ganacsigaaga, ilaa iyo inta aadan daynin cinwaanka hortiisa.
In kastoo sida aan hore u sheegnay, ma aragto safar gaagaaban oo afar maalmood ah oo aanad waqti u haysan inaad socod tagto baarkin (taas oo ah raaxo dabcan), laakiin meesha banaanka ka baxsan ee ku dabaalanaysa biyaha qabow waxaad arki caleemaha madow waxay ka dhacaan geedaha iyo dadka waayeelka ah ee socodka eyga la isku qurxiyo, oo ku caajisey kelinimada iyo hawlgabka ...
Ma jiraan caruur, haddii aan la tirin, ma xisaabno iyaga sababtoo ah waxay wali ku soo laabtaan farriinta. Sidaa darteed egyahay eeyga, maxaa yeelay waa hubaal waa midda dhaxalka ah.
Dabcan, shuruucda daacadnimadu waxay ku jiraan qaabkooda, caddaalad. Haddii aad ina soo shaqeeyay makhaayad iyo Tababaraha kaama bixin, maxaa yeelay, aad qabto dhibaatooyin iyo tegi doonaa musallif by 80 Euros aan aad u qaadato maxkamadda, laakiin aad ku socoto in ay cunaan maqaayad ah qoyskaaga oo aad ninka aan bixin ... idinkoo ku doodaya in aad samayn doonto bilo bilo ah, markaan wiilkaaga bixinayo. Carruurtu waxay sidoo kale soo celiyaan daacadnimo, ku dhawaad ​​siman, laakiin maaha macno u dhigma; Mawqifkayaga magangelyadu waa dadka waayeelka ah ee la daayey ee magaalooyinkeena Hispanic, isku dayaya in ay iibiyaan farshaxanimada mesh ee siinaya wadada guud, sida ay yihiin, iyada oo farqiga ay u leeyihiin nolol ay ku hayaan lacagta ay tahay in gobolku ku soo celiyo by ganacsiga halka qayb bulshada ... su'aal noo, laakiin si fiican marka waxaannu xusuusan nahay in badan oo ka mid ah muddo dheer ku noolaa baabbi'ine cudurada adag, oo keliya, daryeelka ay dhaleen oo aan shuruudaha inaannan ahayn kuwo aan awoodin inuu iyaga siiyo.
Waxaan joojiyaa inaan caddeeyo inaanan ku fekerin Dutch, ama caadadeena Hispanic. Kaliya waxaan tusaaleyaa sababtoo ah farqiga u dhexeeya macnaha guud.
Laakiin saaxiibtinimada kuleylka qaxwada wanaagsan waa mid fiican, mar kale ku kulmaan Leidseplein labo qof oo dalkaas ah oo lagu habeeyey jawi ka dib markii 18 ay xiiso leedahay. Inkasta oo sida aad u qabsanaysaa dhaqanka in ay ma aqbali lahayd dalka this #% @ # 9 ... (dambi), by caado ka mid ah Yurub ee kaliya reading headlines ah; iyo haddii aan jaraa'id ka maqan waxbarashada iyo nolosha wararka sensationalist ee denbiyada abaabulan oo xad gudub ku ah xuquuqda aadanaha, si wadajir ah ula dadaalka yar ee siyaasiyiinta our #% @ # 9 ... (oo dhan ma aha, laakiin inta badan) si ay u sameeyaan waxyaalaha waara ama ugu yaraan siiyaan sawir wanaagsan marka ay yihiin danjirayaal.
Waxay asal ahaan noo yihiin, aadanaha. Naalloon karo si ay u leeyihiin in lifaaqa in xeerarka uu sannadood qaaday si ay u dhisaan, sida nidaamka road ee Amsterdam la shabakad adag oo baabuur dhulka hoostiisa ee gaarka loo leeyahay, wadiiqooyin baaskiil, tareenka iyo biyaha. Walwalkoodu waa isku mid, laakiin waxaa leh caddaynno kala duwan: ma jirto cid u maleyneysa sida halkan ka mid ah gaari weyn, oo mararka qaarkood loo yaqaan 'testicle' saddexda ah. Maya, waxay isticmaalaan gaari isku dhafan, oo loogu talagalay dadka qaangaarka ah (hoos u dhaca) iyo koritaanka mootada: inkastoo ay muhiim tahay baaskiil. Sicirku maaha mid muhiim ah, haa, oo leh gabal yar oo leh qiimo ka badan kan la mid ah, haddii aadan rabin in la xado oo la dhammeeyo ilaa jiifa.
Society waa mid caddaallad siyaabo badan, laakiin weli waxay yihiin nala mid ah, si aydnaan u khasaarayn been: idin neceb oo polish ah sababtoo ah waxa la xiriira dembiyada, laakiin isku raacsan yihiin in aad adeer u heli doontaa by samaacado 15 Euros for iPhone mudan 60 dukaanka Xitaa waxay bogaadinayaa uu lagu daabacay iyo uma dulqaadan isha ka qiratid in qayb ka mid ah ay gaarka ah.
Ma jiro wax xatooyo ah, laakiin waa mid aad u fiican in aad ka heli kartid boorsadaada si aad u qorsheysan rose. Ha ka hadlin sababtoo ah waa wax aan lumino, oo aan nagu filneyn in aan kufarinno maandooriyaha iyo dembiyada abaabulan ee aan qeylada ku hayno cirka. Halkaa waxaad ku socon kartaa saacado yar oo iPad ah gacantaada oo guud ahaan dadku kuma dhaawici karaan, sababtoo ah wakhtiga iyo sharciga ayaa ka dhigay iyaga bisil. Tricks waxay ku jiraan heer kale; Waxay ka baqayaan sharciga sababtoo ah waxay ogyihiin in kaadida ku jirta wadada ay ujirto 200 Euros, laakiin markii ay xirxiraan waxay noolaan karaan sawirada bilayska habeenkii. Weydiiso ilaaliyaha biyaha biyo kasta oo 5 kasta, haddii uu diido inuu xabsi ku jiri karo bil gudaheed; Marka ilaaliyuhu uu daalan yahay, waxaad u sheegtaa inaad rabto inaad kaadisid. Haddii uusan ilaaliyuhu degdegin, waxaad kaadidoontaa gudaha iyo hadda maaha oo kaliya inuu difaaco eedeymaha ah dayacaad, laakiin sidoo kale nadiifinta feejignaanta. Markaad joogtid maxkamad, taas oo ah maalinta xigta ...
Sir Judge, Anigu waxaan ahay muwaadin daacad ah, aan qofna ma yeelin, Waxaan aad uga xumahay isagoo ka go'an la'aanta this si kastaba ha ahaatee waxaan diyaar u bixin Euros 200 ma ihi, waayo, waxaan qabaa inay saacadood 32 kale oo muhiim ah oo aan waqti u adeegaya dadka u baahan in isbitaalka .
Haa, waa haa, sanadaha, ganaaxyada iyo anshaxa hay'adaha waxay dadka ka dhigaan inay ixtiraamaan sharciga. Inkasta oo kaliya in aad aragto qof wadista baaskiilka hal gacan iyo ku hadalka telefoonka kula kale, ama gabar iyada eey ku jirta dambiisha hor in uu kaliya u dhaqaaqdo xun iyo badhidii murgiyey ee Afayeen of wheel hore in aad u jajabiso bartamaha waddada fowdo.
Taasi waa sida aynu bini-aadanka u kala duwanahay. Tani waa aragtida aan ka qabo iyaga, waddooyinka oo dhan wax walba waa socdaalka, tareenka, tareenka, tagaasida, sanadaha, wax walba.
Marka laga reebo kafateeriga, halkaas oo waqti qarsoodi ah istaago. Qofna kuma dhiirrigelin inuu joojiyo wadahadalka. Qofna kuma jiro Ilaa iyo intii aan awoodey in aan cabo qaxwaha, sanduuq cajiib leh oo leh ukun, qor maqaalkayga iyo sida aan ka tagay waardiyaha waxay arkeen aqoonsigeyga, ka dib markii ay isku dayeen labo isbuuc oo khasab ah oo uu ku hadli karo oo tarjumi karo.
Oo isna wuxuu iigu yeedhay qaxwo kale, oo qosol ka ahaa guriga.
Post Previous«Previous Contours AutoCAD - From Data Total Station
Post Next Kuwa ku guuleysta 7 Wicers NaturalNext »
2 Jawaab: "Xogta Nederlandka, muuqaallada Latin America"
Booqo qunsulka Holland ee wadankaaga.
Aylwim yessie ortega weber isagu wuxuu leeyahay:
Hadaad i caawin kartaan, waxaan ahay reer Kolombiya, awoowe wuxuu ahaa Dutch, waxaan rabaa in aan la kulmo qoyskeyga wadankaas
Sideen ku heli karaa daryeelka caafimaad ee aan xannibnayn
Waxaan jeclaan lahaa inaad i caawiso